China auto mota air conditioner inoshanda kabhoni HEPA kabhini firita yemota yemhepo firita fekitori uye vagadziri | Chuangqi
Auto mota mhepo inogadzirisa inoshanda kabhoni HEPA kabhini firita yemota yemhepo firita
1. YEMAHARA HUNHU & RUBATSIRO: kubva kune Professional BIG Fekitori; Professional technical technical rutsigiro; kana iwe usingagutsikane, haugone kudzosera njodzi; Yakakwira kuita mhepo firita
2. KUSHANDA: Sefa yemhepo yakachena inovandudza kuyerera kwemhepo uye inodzivirira tsvina neguruva
3.KUSVITSANA: ndapota tarisa iyo modhi uye makore kubva kumifananidzo, Kana iwe usina chokwadi kana ichi chiri chinhu chakakodzera chemota yako ndapota titumire ese manhamba ako uye isu tichafara kukutarisa.
Chigadzirwa Chigadzirwa: Mhepo Kabhabhathi Sefa
OE Nhamba OEM Kubudirira 99.99%
Ruvara Nhema MOQ 100pcs
Item Zita Mhepo Kabhini Sefa Mharidzo Inowanikwa
Kuberekwa Hebei, China Brand Conqi firita
Mashoko Yakagadziriswa kabhoni Chitupa: ISO9001
Porosity: 5um Filter PARTICIPLE 0.3 micron iri 99.99%
Kushanda: Bvisa zvidimbu kubva mumhepo zvinopinda mukamuri.
Yakasarudzika: Ruvara, kugona kusefa, antibacterial, chero firita zvido.
Kurongedza ruzivo: Yakasarudzika polyethylene mabhegi, makatoni, kana zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Nguva yokutora: inenge. Mukati memazuva 15-30 mushure mekusimbiswa kwehurongwa
Mamiriro:Chengetedza iwe nemhuri yako kure neguruva, mukume uye zvinhu zvine chinhu nekuchengetedza mweya wakachena mumotokari yako. Iyo inogona zvakare kubvumidza yakakwira-kuyerera kugona nepo ichikwezva yakanaka guruva, gadziridza iyo yekufema mumota yako yekupisa uye yemhepo mamiriro system.
Yakagadziriswa Carbon Layer: Yakakwira mashandiro emagetsi emarasha anobatsira kubata zvinosvibisa, chiutsi, uye magasi anokuvadza zvinobudirira, kugadzirisa HVAC mashandiro, kudzora hwema hwekare hwemota uye nekuona mweya waunofema nyowani.
Kurudzira:Iwe unorayirwa kuti uchinje yako kabhini yemhepo firita gore rega kana chero gumi nemaviri mamaira. Iwe unofanirwa kuzvichinja mamaira zviuru zvishanu mushure mekutyaira munzvimbo dzakasviba zvakanyanya kana kufamba mumigwagwa yakasviba.
Nyore Kuisa:Iyo yakakwana kukwana uye inotora isingasviki gumi mins kupedzisa firita shanduko. Izvo zviri nyore kuverenga museve wekufema kwemhepo padivi zvinoita kuti ive nyore kuisa.
ONA: Iwe unofanirwa kunyora mugore uye mhando yemotokari yauinayo usati wairaira chikamu kuti uzive kana ichienderana nemotokari yako.
Yakagadzirwa neyakagadziriswa marasha marara ari mukati meiyo filtration zvinhu zvinobudirira kubvisa guruva uye chinhu chakasimba, ichivabata kure kure nemukati memotokari uko vasingakwanise kufemerwa mukati. Pamusoro pezvo, shandisa tekinoroji yepamberi firita kuti uve nechokwadi chehutano mukati memota nharaunda.
Mhedzisiro iyi kabhoni mhepo inogara inogara yakatsva, inofadza uye ine hutano kufema.
Ino chengetedza mota yako yemukati yakachena uye inovimbisa hutano mune-mota nharaunda.
Tarisa uone mhepo yekutsiva ichitsiva kana kunhuhwirira kwemoyumu kuchibuda mumhepo yekufefetera yemotokari.
Tarisa uone mweya filter kutsiva kana mota Heating, Ventilation uye Air Conditioning (HVAC) System inoratidza kusashanda zvakanaka kana kushanda zvakanaka.
1. OEM Kugadzira unogamuchira: Chigadzirwa, Pasuru
2. Muenzaniso wekuenzanisira
4. mushure mekutumira, isu tinoteedzera izvo zvigadzirwa zvako iwe kamwe pamazuva maviri, kusvikira iwe wawana izvo zvigadzirwa. Kana wawana zvinhu, zviedze, uye undipe mhinduro kana iwe uine chero mibvunzo
Pashure: 88568-0D520 air conditioner anti guruva firita isiri yakarukwa mota mweya une mamiriro firita
Zvadaro: Wholesale enginge zvikamu zvekutenderera pamafuta emafuta 26300-02503 yeHyundai mota
2004 Toyota Corolla Cabin Mhepo Sefa
Kabhini Mhepo Sefa Mota YeMhepo Inodzora 80292s6d
Kabhini Mhepo Sefa Inosuka
Carbon Yakagadziriswa Kabhini Mhepo Yekutsikirira Midhiya
Yakagadziriswa Carbon Mhepo Sefa 87139-0N010